Virgin Summit | Climb O'Clock
Tag Archives: Virgin Summit
Posted on February 2, 2014	by climberdoelone
“ကဝါကာပို တောင်” Mt. Kawakarpo တရုပ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဒီကျင် ဒေသမှာ တည်ရှိတဲ့ ကဝါကာပို လို့အမည်ရတဲ့ တောင်ဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၆၇၄၀မီတာ အမြင့် ရှိပါတယ် ။ ပုံပြင် ဂမ္ဘီရ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကြားဖူးနေကြဖြစ်တဲ့ ရှမ်ဂရီလာ လို့ အမည်ရတဲ့ တောင်တန်းကြီးမှာရှိတဲ့ “ကဝါကာပို တောင်” ဟာ တိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့ ပူဇော်ပသ ရာ တောင်တွေထဲကမှ အဓိက ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ တောင်မြင့်ကြီးတစ်လုံးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ … ယူနန်ပြည်နယ် ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ “ကဝါကာပို ရေခဲတောင်ထိပ်” ဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှတက်ရောက် အောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ … Continue reading →
Posted in Mountaineering, News	| Tagged China, Mt. Kawakarpo, Virgin Summit	| 1 Comment